China Threaded Ball Khangela umzi-mveliso weValve kunye nababoneleli |Dongsheng
1. Uxinzelelo lokusebenza: 1.0/1.6Mpa
3. Uhlobo loqhagamshelwano: BSP okanye BSPT
4. Uvavanyo: DIN3230, API598
5. Phakathi: Amanzi amatsha, amanzi olwandle, izinto zokutya, zonke iintlobo zeoyile, iasidi, ulwelo lwealkaline njl.
Ivalve yokujonga ibhola ephothiweyo isetyenziswa kakhulu kumanzi amdaka, amanzi amdaka okanye imibhobho yamanzi aqinileyo enqunyanyisiwe kakhulu.Ngokucacileyo, inokusetyenziswa nakwimibhobho yamanzi okusela enoxinzelelo.Ubushushu bendawo ephakathi yi-0～80℃.Yenzelwe ilahleko yomthwalo ophantsi kakhulu ngenxa yokudlula iyonke kunye nemiqobo engenakwenzeka.Ikwayivalve engangeni manzi kwaye ayinakugcinwa.
I-Ductile Iron, i-epoxy-coated body kunye nebhonethi, isihlalo se-NBR/EPDM kunye ne-NBR/EPDM-coated aluminium ibhola.
Nokuba ngokuthe nkqo (phezulu kuphela) okanye ifakwe ngokuthe tye.
Ifumaneka ngokobukhulu: 1″ ukuya kwi-3″.
Uluhlu lobushushu: 0°C ukuya ku-80°C okanye -10°C ukuya ku-120°C.
Iqondo loxinzelelo: PN10 ilinganisiwe
Kulula ukuyigcina kwaye uyifake.
Uxinzelelo oluphantsi lokuqhekeka.
Ukufumana iinkcukacha ezigcweleyo nceda ukhuphele idatha ekhaphayo.
Ibhola Jonga iValve enomzimba weIron Ductile
1 Umzimba GG25/GGG40
4 Ibhola NBR/EPDM
5 Ibholt Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
6 Nut Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Ngaphambili: I-Flanged Ball Check Valve
Okulandelayo: Flanged iValve yokuHlola ethuleyo
Inkcazo yeMveliso yeMveliso yeMveliso yeDisc enye ikwabizwa ngokuba yi-valve yokuhlola ipleyiti enye, yivalve enokuthi ithintele ngokuzenzekelayo ukuphuma kwamanzi ngasemva.I-disc ye-valve yokutshekisha ivuliwe phantsi kwesenzo soxinzelelo lwe-fluid, kwaye i-fluid igeleza ukusuka kwicala lokungena ukuya kwicala lokuphuma.Xa uxinzelelo kwicala lokungena lisezantsi kunolo kwicala lokuphuma, i-valve flap ivalwa ngokuzenzekelayo phantsi kwesenzo somohluko woxinzelelo lwe-fluid, ubunzima bayo kunye nezinye izinto ...
Flanged iValve yokuHlola ethuleyo
I-Thin Single Disc Swing Jonga iValve ngeNtwasahlobo
Inkcazo yeMveliso yeMveliso yeMveliso yeMveliso edibeneyo, i-valve ye-wafer swing check valve ibonelela ngezakhono ezibalaseleyo zokutywina zoxinzelelo oluphezulu kunye noluphantsi.Ilungele ukunyuswa phakathi kwe-PN10/16 kunye ne-ANSI 150 iiflange kwimilinganiselo 2″ ukuya kwi-12″ Isetyenziselwa ngokukodwa, iinjongo zoshishino kunye ne-HVAC.Amanzi, ukufudumeza, ukupholisa umoya kunye nezixhobo zomoya ezicinezelweyo zizicelo.Ivalve yovavanyo olunoqoqosho olugcina igumbi.Nokuba ngokuthe nkqo (phezulu kuphela) okanye ifakwe ngokuthe tye.Iimpawu eziphambili: C...
Inkcazo yeMveliso yeMveliso yeMveliso Umsebenzi we-valve yokuhlola iiplati ezimbini kukuvumela kuphela ukuba i-medium ihambe kwicala elinye kwaye ithintele ukuhamba kwelinye icala.Ngokwesiqhelo olu hlobo lwevalvu lusebenza ngokuzenzekelayo.Ngaphantsi kwesenzo soxinzelelo lwe-fluid ehamba kwicala elinye, i-valve flap ivula;xa ulwelo luqukuqela kwelinye icala, uxinzelelo lolwelo kunye nokuzenzekela kwe-valve flap isenzo kwisitulo sevalvu, ngaloo ndlela kunqunyulwa ukuhamba.Iimpawu zoLwakhiwo lweWafer...